Fanafihana “Cash Point” Jiolahy 3 maty nodarohan’ny fokonolona
Omaly alarobia tokony ho tamin'ny 5ora tolakandro teo dia mpanao "cash point" na ireny mpandefa sy fakana vola amin'ny finday ireny iray ao Port-bergé raha iny hody avy nirava avy niasa no nandrasan'ny jiolahy tamin'ny basy sy antsy teo am-baravaran'ny tranony.
Lasa tamin'izany ny kitapo misy vola sy fitaovana fampiasany. Naratra mafy ity farany ka tsy maintsy nalefa notsaboina any Antsohihy, raha ny fampitam-baovao. Rehefa nanara-dia ny fokonolona dia 4 hafa no voatifitry ny jiolahy ka naratra. 3 tamin'ireo jiolahy kosa no tratra raha nifanenjehana tany anaty ala ka niharan'ny fahatezeram-bahoaka. Nalefa nanoloana ny kaominina ny fatin'izy ireo 3 nodorana fa ny iray hafa namany kosa tafatsoaka. Efa azo ihany koa ny kitapo izay noheverin'izy ireo ho valin-kasasarany. Tsy nitsitsy ireo olona ka ny ain'ireo jiolahy no nanefa. Nihevitra ny harovan'ny fitaovam-piadiana kinanjo tratry ny be no ho vitsy.Miha mahazo vahana hatrany ny fitsaram-bahoaka.
Nangonin 'i Toky R